Inona no Boky About?
Ny boky tonga avy Oktobra 1, nefa afaka maka santionany ao amin'ny toko faha-TheGoodLifeTheBook.com, ary afaka ny filaminana mialoha ny boky eto.
Fandinihana ny Fifanarahana
Nijery ny ankamaroan'ny fivoriambe ara-politika farany izao tapa-bolana. Ny mpandahateny ao amiko tsy afaka nanampy fa ny-mandinika ny hafatra sy ny oratory fahaiza-manao ny kandidà sy ny mpanohana. Every person...
Tonga Lafatra Hatezerana 'Andriamanitra
Ity misy toriteny vao haingana no nitory ny Salamo 95:10-11. My 3 hevitra tsotra: I. Mampahasaro fahotana ny fahatezeran'Andriamanitra II. Ny fahotana dia Alernate Path III. Sin keeps us from God’s rest I...
Nahoana aho no Nanoratra ny Bokin'i
Hoy ny boky famotsorana Oktobra 1, nefa afaka mialoha mba izany izao eto.
Olona tsara tarehy ny ao am-bohoka
Trip Lee amin'ny "Mahafinaritra ny Fiainana” tsy maniry ao amin'ny Vimeo. Ny hira voalohany nosoratako ho an'ny rakikira farany indrindra, “The Good Life” dia hira antsoina hoe "Mahafinaritra ny fiainana.” Desiring God asked me...
Te-hanomboka amin'ny alalan'ny famakiana ny sasany teny nalaina. Koa henoy tsara fotsiny, ary mieritreritra raha ianao na tsy miombon-kevitra amin'ny zava-nanao hoe:. “Anger dwells only in the bosom of fools.” – Albert...